Wararka Maanta: Isniin, Apr 8 , 2013-Al-shabaab oo Magaalada Buulo-burte ku toogatay Gabar ay ku eedeeyeen in ay Jaajuus u ahayd Dowladda Soomaaliya
Gabadha la toogtay oo lagu magacaabi jiray Ayaan Maxamuud Casar oo 22-jir ahayd la sheegay in lagala dagay gaari ka tagay Muqdisho oo ka tagay oo ku sugan degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
“Ayaan waxay ahayd jaajuus u shaqeynaysay dowladda Soomaaliya, iyadoo cadowga u gacan-gelisay toddoba ruux oo mujaahidiin ah oo uu ku jiray macallinkeeda,” ayuu yiri waaliga Al-shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose, Sheekh Yuusuf Cali Ugaas oo hadlayay dilka gabadha kaddib.
Sidoo kale, waaligu wuxuu sheegay inay jiraan kuwo kale oo gacanta kula jira falalkan oo kale ayna ku daba-joogaan; iyadoo barxadda uu dilku ka dhacay ay ku sugnaayeen boqolaal qof oo ka tirsan dadka deggen degmada Buulo-burte.
Goobjoogayaal ayaa iyaguna sheegay in haweeneyda ay toogteen dhowr dhallinyaro ah oo basootado watay iyadoo dilkan uu noqonayo kii ugu horreysay oo ay Al-shabaab sannadkan ku fuliyaan gabar ay ku eedeeyeen inay jaajuus u ahayd dowladda Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa ka talisa degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan, iyadoo dowladda iyo ciidamada caawinaya ee AMISOM ay ka taliyaan deegaanno ay ka mid tahay magaalada Baladweyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan.
Ma ahan markii ugu horresyay oo ay Al-shabaab toogasho u dilaan dad ay ku eedeynayaan inay jawaasiis u yihiin dowladda Soomaaliya, Itoobiya iyo Mareykanka, balse dhowr jeer oo hore ayay toogteen rag iyo dumar ay ku eedeynayaan dambiyadan oo kale.